EMUI 4.1, ဤသည်သည် Android 6.0 ကို အခြေခံ၍ Huawei interface ကိုအလုပ်လုပ်သည် Androidsis
Alfonso က de Frutos | | Huawei, IFA
ထုတ်လုပ်သူ, ဆိပ်ကမ်း၎င်း၏အသစ်သောမိသားစုအတွက်ပုံမှန်အတိုင်း Huawei က Nova y Huawei Nova Plus ၎င်းတို့တွင် Android 6.0 MarshMallow, Google ၏ operating system ၏စိတ်ကြိုက်မျက်နှာပြင်အောက်တွင်ရှိကြသည် Huawei, EMUI ၄.၁။ ကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သော interface အမျိုးအစားကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုံးဝမကြိုက်ပါ၊ သို့သော်ဤဗီဒီယိုတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းထုတ်လုပ်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ခိုးယူနိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်ဝန်ခံရမည်။
Huawei Spain ရှိ Product Trainer Juan Cabrera သည်လျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးကိုပြသရန်တာဝန်ရှိသည် Custom layer သည်၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုများစွာတိုးတက်စေသည် ယခင်ဗားရှင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Huawei ၏ထုတ်ကုန်များကိုကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ခြင်း။
EMUI 4.1 တွင်ထူးခြားသည့်လက္ခဏာများရှိသည်
ငါအပလီကေးရှင်းအံဆွဲမပါဝင်သောဆိပ်ကမ်းများအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကွဲပြားသောစားပွဲခုံများပေါ်တွင်လျှောက်လွှာများထားရှိခြင်းက ပို၍ အသုံးဝင်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သို့သော်သင်ဤစနစ်ကို ပို၍ နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေငြင်းစရာမလိုပါ Huawei EMUI 4.1 ၏ interface အသစ်သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်.
EMUI 4.1 သည် ဆက်၍ လောင်းနေသည် လက်လက်ဟန်အမူအရာ။ Huawei မှထုတ်လုပ်သော R&D တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြောင့်၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သောနည်းပညာကိုရရှိခဲ့ကြပြီး၎င်းထက် ပို၍ အသုံးဝင်သည်။ လက်ဖြင့်ခေါက်ခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းစွာရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဖော်ပြရန်မ မျက်နှာပြင်အကြောင်းအရာအားလုံးကိုဖမ်းယူ, ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးကူးယူသည်အထိငါတို့ knuckle နှင့်အတူမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် "S" အောင်သည်အထိအလိုအလျောက် scrolls ။ အီးမေးလ်များပို့ခြင်းသို့မဟုတ်စာပို့ခြင်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
တဖန်သင်တို့က, သင် EMUI 4.1 interface ကိုဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » EMUI 4.1, ဤနည်းသည် Android 6.0 ကို အခြေခံ၍ Huawei ၏ interface ကိုအလုပ်လုပ်သည်
ဟိုဆေး C. Diaz ဟုသူကပြောသည်
ငါ emui9အလွှာနှင့်အတူ p4.1 lite ရှိသည်။ လက်ဖြင့်ဖမ်းယူခြင်းနှင့် S နှင့်အပြည့်အဝဖမ်းယူခြင်း…အလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်။ ဘယ်လိုသူတို့ activated နေကြတယ် ???
Jose C. Diaz ကိုပြန်ပြောပါ
ကောင်းပြီဟုတ်တယ်၊ အပြောင်းအလဲကဘာလဲ။ ကျွန်ုပ်တွင် EMUI 8 - Android 4.0 နှင့်မိတ်ဖက် ၈ ယောက်ရှိပြီးဗွီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးကျွန်ုပ်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ သတင်းသည်ဘယ်မှာရှိသနည်း။
Adrian Suarez နေရာဒေသအလွှာ ဟုသူကပြောသည်
ဒီ 4.1 update ကိုပြုလုပ်သမျှအောက်ခြေရှိခလုတ်များ၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်, ထို့ကြောင့်ငါ့ကိုမျက်နှာပြင်နေရာလျော့နည်း။ မကောင်းပါ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ယခင်ဗားရှင်းသို့မည်သို့ပြန်သွားမည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါကကျွန်ုပ်သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ဆင်ပါက၎င်းတို့သည်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားကိုသာလျှော့ချမည်
Adrian Suarez အားပြန်ပြောပါ
၎င်းကို Nova Launcher ဖြင့်အစားထိုးလိုက်ပါ
ငါမှာ WhatsAp ခွင့်ပြုချက်များနှင့်၎င်း၏စူပါအနေအထားနှင့်အတူပြproblemsနာများရှိသည်, ဒါကြောင့်ငါ့ကို app ကိုထားခွင့်မပြု
IGNACIO LOPEZ ဟုသူကပြောသည်
အကြံပြုထားတဲ့ App drawer တွေရှိပါသလား။
IGNACIO LOPEZ သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ဤဗားရှင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ P9 Lite တွင်တစ်လခန့်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဆဲလ်သည်အလွန်နှေးကွေးပြီးနောက်ခံရှိအက်ပလီကေးရှင်းများကိုဖျက်လိုသောအခါငါ EMUI အလုပ်လုပ်သည်ကိုရပ်တန့်သွားပြီဟုပြောသောဆိုင်းဘုတ်ကိုရလိုက်သည်၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်ချွတ်ယွင်းနေဆဲရွေးမှုကိုရွေးချယ်ပါ။
8 ဟုခေါ်သော Huawei p9999 lite ၏လည်ပတ်မှုစနစ်၏ဆိုလိုရင်းသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုသိသနည်း။
ကျွန်ုပ် prepaid vodafone ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဒေတာကိုသုံးစွဲသည်။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်မဖြုတ်နိူင်ပါ။
စတော့ရှယ်ယာများကိုရောင်း။ ကြီးကြပ်သော Rainmaker: Stock Trading တွင်ကြွယ်ဝချမ်းသာပါစေ